कर्मचारी र सेवाग्राही एक सिक्काका दुई पाटा बन्न सक्नुपर्छ:: Artha Dabali
कर्मचारी र सेवाग्राही एक सिक्काका दुई पाटा बन्न सक्नुपर्छ
“सक्षम निजामती प्रसाशन विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने नाराका साथ आज नेपालभर निजमती सेवा दिवस मनाइदै छ । राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिने निजामती सेवा सेवा थालनी भएको ६३ वर्ष पूरा भएको छ ।
योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका जनशक्तिबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय निजामती सेवा अधिकारको वैधानिक प्रयोग गर्ने माध्यम पनि हो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य र पुनर्संरचनाको चरणमा रहेको निजामती सेवाका संरचनाहरु पनि परिवर्तन हुँदै छन् ।
यतिवेला संसदमा निजामती सेवालाई निर्देश गर्ने कानुन निर्माण हुदै छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्मा विचाराधीन छ भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐनका निर्माणका लागि सिद्धान्तको निर्माण हुने क्रम जारी छ ।
सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण जनतालाई राज्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्नमा निजामती कर्मचारीको भूमिका हुनुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी होस् भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।
यसै सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल निजामती सेवा सरकारको ऐना भएको बताउँदै निजामती कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन हुने उल्लेख गर्छन ।
टे«ड युनियनको माध्यमबाट निजामती सेवामा केही उल्लेख्य कार्य भए को दावी उनको छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालसंग अर्थडवलीको लागि तारा वाग्लेले गरेको कुराकानीको सार :
निजामती कर्मचारीले निजमती सेवा दिवस मनाउन थालेको १६ वर्ष भैसकेको छ । यस क्रममा कर्मचारीले आफ्ना अधिकार र माग वकालत गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गर्छन् । यसपटकको निजामती सेवा दिवस कसरी मनाउदै हुनुहुन्छ ?
गरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित सुशासन प्रदान गर्न राज्यले निजामती प्रशासनको व्यवस्था गरेको हुन्छ र तिनै कर्मचारीले मनाउने दिवस हो– निजामती दिवस । हामीले यसपटक मनाउने दिवस नारा ‘सक्षम निजामती प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने हरको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी करिब ९३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारले यस दिवस मनाउछन् । यस क्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत पनि गरिन्छ । साथै नेपालको निजामती प्रशासन सुशासनप्रति अझ प्रतिबद्ध र नतिजामुखी बनाउनको लागि कर्मचारी विच छलफल पनि गरिन्छ ।
नागरिक स्तरबाट छिटोछरितो र सहज ढङ्गले सरकारी सेवा प्राप्त होस् भन्ने सुझाव आएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बिनाझन्झट समयमै गुणस्तरीय सेवा दिएर आफ्ना कामकारबाहीबाट जनताको मन जित्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिदै आएका छौ । सरकारको ऐनाका रूपमा चिनिने निजामती कर्मचारी सरकारको प्रमुख प्रशासनिक संयन्त्र हो ।
कतिपय व्यक्तिले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारप्रतिको धारणासमेत बनाउने गरेका छन् । अहिले निजामती कर्मचारीप्रति हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । आगामी दिनमा निजामती सेवा प्रति जनताको विश्वास टिकाउ राख्न आधिकारिक ट्रेड युनियनले जोड दिने छ ।
अधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको ३ वर्ष भन्दा बढि भैसक्यो , यस अवधिमा कर्मचारीको हकहितको लागि अधिकारिक ट्रेड युनियनले के के काम गर्यो ?
पालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै कर्मचारीको हकहित स्थापित गराउन केन्द्रित छ । विभिन्न संगठनमा आवद्ध कर्मचारी र सरकारको प्रयासबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम स्थापित भएको युनियनले कुनै पनि कर्मचारी मर्कामा पर्नु हुदैन र राज्यले पनि कर्मचारीका माग संबानेध गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छ । ट्रेड युनियनको माध्यमबाट निजामती सेवा समयसापेक्ष परिवर्तन हुने खालका नीति तथा योजना बनाउने त्यस्ता कार्यमा बढी समय दिने खालको र वास्तविक पिल्सिएका आमकर्मचारीको पक्षमा आवाज उठेका छन् । निजामती सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तत गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजामती सेवालाई परिवर्तन उन्मूख बजाउन र कर्मचारीको हित अभिवृद्धि गर्न अधिकारिक ट्रेड युनियन लागिपरेको छ ।
अधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि प्रसाशन भित्र ट्रेड युनियको हस्ताक्षेप अन्त्य हुन्छ र स्वच्छ प्रशासनको विकास हुन्छ भन्ने सरसरको अपेक्षा थियो । तर प्रशासनभित्र कर्मचारीका अमर्यादित कृयाकलाप रोकिएनन् कर्मचारीतन्त्रभित्र वेथिति बढ्यो भन्ने आरोप छ नि ?
अधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि प्रशासनभित्र कर्मचारीका राजनीतिक कृयाकलाप धेरै हदसम्म रोकिएका छन् । कर्मचारीले आफ्ना माग अनुसारका काम होउन भनेर कही कहीँ आवाज उठाए होलान् त्यसलाई अमर्यादित नै भन्न मिल्दैन । बेथिति कुनै व्यक्तिका कारणले हुन सक्छ ।
कुनै व्यक्तिले बेथिति ल्यायो, कुनै असंगति क्रियाकलाप र्गयो भने त्यसकै आधारमा सबैमाथि आरोप लगाउनु उचित होइन । हामी भित्रका कसैले गल्ती गर्यो, मर्यादाविपरित काम गर्यो, कानुन मिच्यो भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ऐनरकानुनमा जे कुराहरू उल्लेख भएको छ, त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । तर, एउटा व्यक्तिले बिगारेको कामको दोष सबैले लिनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रशासनमा कर्मचारीको अनुचित हस्ताक्षेप बढेकोले सांसदहरुले ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । यस सम्वन्धमा तपाईको प्रतिकृया के छ ?
कर्मचारीले आफ्ना हक अधिकारको रक्षाको लागि संघ संस्थामा आवद्ध भएर आवाज उठाउन पाउनसपर्छ । ट्रेड युनियन राइट्स आइएलोद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा पनि यसका आफ्नै खालको भ्यालुजहरू छन् । त्यस अनुसार प्रदान गरिएको कानुन र लडेर ल्याएको ऐन भएकाले प्राप्त अधिकार संकुचन गर्ने तथा खुम्च्याउने, अनर्गल रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने कुरा ठिक होइन । यसका न्यायोचित पक्ष पनि केलाइनु पर्छ ।
केही व्यक्तिका काम हेरेर सबैलाई आरोप लगाई निर्णय गर्नु गलत हो भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो । युनियनमाथि अंकुश लगाउने, खुम्च्याउने तथा संकुचित बनाउने र गतिविधिहरूलाई छेकवार गर्ने क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन ।
यसप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियन संवेदनशील बनेको छ । कर्मचारीका सबै प्रकारका गतिविधी व्यवस्थित गर्दे लैजान युनियन प्रयसरत छ तर युनियन नै खारेज गर्ने भन्नेमा सहमत छैन ।
ट्रेड युनियन आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तिरदायी भएनन् , कसरी थप सेवा सुविधा र अधिकार पाइन्छ भन्ने तिरमात्र केन्द्रित भए भन्ने जनगुनासो छ । यस अवस्थामा निजामती सेवालाई व्यवस्थित र जतनाप्रति उत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
निजामती सेवा भनेको राष्ट्रको दर्पण हो । निजामती कर्मचारलाई उत्तरदायी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलायृ गाइड गर्ने कानुन बलियो हुनुपर्छ । कर्मचारीलई अनुशासित बनाउन निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ । यसले नै मुलुकको समृद्धिको आधारहरू निर्माण गर्न सक्छ । यसले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गर्न सक्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो ।
यससँगै ऐन, कानुनहरू निर्माण गर्दा पारदर्शी, निश्पक्ष र चुस्तदुरुस्त ढंगले निर्माण गरिनुपर्ने माग समेत उठाउँदै आएको छ । ऐनमा कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाससम्मलाई महत्व दिइनुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने खालको भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, सरुवा, बढुवा लगायतको विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्छ । निजामती सेवा जति सबल भयो, राज्यको प्रभावकारिता त्यति नै बढी हुन्छ । प्राप्त अधिकार कटौती गर्दै निजामती सेवालाई झन् संकुचित बनाउने प्रयास गर्नु उचित होइन ।
युनियन चुस्त, दुरुस्त र सशक्त निजामती सेवाका लागि प्रयासरत छ । अहिले बन्न लागेका प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाका कानुनको निर्माणमा चासो दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले समायोजन ऐन कर्मचारीमैत्री नबनाउँदा कतिपय कर्मचारीमा निराशा पैदा भएको तर पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् । बरु स्थानिय सरकारबाट कर्मचारीलाई कामबाट फिर्ता पठाउने काम भएको छ । कर्मचारी र नागरिक एक सिक्काका दुइ पाटा हुनुपर्छ अनिमात्र स्वच्छ र प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास हुनेछ ।